Waan Hubaa In Messi Soo Laabashada Neymar Jecel Yahay, Ter Stegen Waxa Uu Qalmaa Mushaar Kordhin. - Gool24.Net
Waan Hubaa In Messi Soo Laabashada Neymar Jecel Yahay, Ter Stegen Waxa Uu Qalmaa Mushaar Kordhin.
March 27, 2020 Mahamoud Batalaale
Halyaygii hore ee kooxda Barcelona ee Rivaldo ayaa waraysi dheer oo uu bixiyay waxa uu ku xaqiijiyay in Lionel Messi uu jecel yahay in Neymar jr uu ku soo laabto Camp Nou.
Iyada oo aanu hore idiinku soo gudbinay qaybtii hore ee waraysigan oo uu Rivaldo kaga hadlay soo laabashada Neymar Jr ee Barcelona iyo sida ay muhiim ugu tahay, waxa uu qaybtan kale kaga hadlaya sida uu Messi u jecel yahay soo laabashada Neymar.
Dhinaca kale Rivaldo ayaa qiray in goolhaye Marc-Andre ter Stegen uu qalmo in mushaar kordhin loo sameeyo iyada oo la ogyahay in ay joogsadeen wadahadalkii ay Barca ku doonaysay in ay heshiis cusub kaga saxiixato Ter Stegen.
Rivaldo oo ka hadlaya in goolhaye Marc-Andre ter Stegen uu heshiiskiisa cusub uga qalmo mushaar kordhin ayaa yidhi: “Waan ku waafaqsanahay in Ter Stegen u u qalmo mushaar kordhin ee wax walba oo uu kooxda u soo qabtay sanadihii ugu danbeeyay”.
“Laakiin waxaan aaminsanahay in aanu yeelan karin mushaar la mid ah Messi ama Suarez sida ay dadka qaar soo jeediyeen. Waxaa waajib ah in uu ka mid noqdo xubnaha kooxda ee ugu mushaarka sareeya. in yar uun ha ka danbeeyo ciyaartoyda Barca ugu muhiimsan” ayuu Rivaldo hadalkiisa raaciyay.
Dhinaca kale Rivaldo ayaa cadeeyay in Lionel Messi uu jeclaan lahaa in Barca ay soo celiso Neymar kaas oo uu tallo ku bixiyay in awooda soo celintiisa la saaro wuxuuna yidhi: “Anigu waxaan hubaa in Leo uu jeclaan lahaa in isaga (Neymar) uu sidoo kale dhinciisa ku haysto”.
Rivaldo ayaa si adag u sheegay in Neymar Jr yahay xidiga xalka u noqon kara kooxdiisii hore ee Barcelona isaga oo soo jeediyay in Martinez oo ka tirsan Inter Milan aanu xalka Barca hadda noqon karin.
Barcelona ayaa la filayaa in ay wax walba u samayn doonto sidii ay Neymar Jr kooxdeeda ugu soo celin lahayd marka uu suuqa xagaagu furmo wuxuuna Rivaldo sheegay in kooxda PSG ay hadda diyaar u tahay in ay aqbasho dalabyo fiican haddii ay Neymar u hesho.